Tatitry ny Mpisera : Poretin’i Etiopia ny fahalalahana maneho hevitra · Global Voices teny Malagasy
Tatitry ny Mpisera : Poretin'i Etiopia ny fahalalahana maneho hevitra
Voadika ny 30 Avrily 2019 12:30 GMT
Samy nandray anjara tamin'ny fandrafetana ity tatitra ity i Ellery Biddle, Lisa Ferguson, Alex Laverty, Hae-in Lim sy Sarah Myers
[Raha tsy asiana fanamarihana manokana dia mankany amin'ny pejy anglisy avokoa ny rohy rehetra ato.]
Ny Tatitry ny Mpisera ato amin'ny Global Voices Advox dia mitondra topimaso amin'ireo fanamby atrehana, ireo fandresena sy fironana mipongatra amin'ny resaka fahalalahana nomerika manerana izao tontolo izao.
Ny famoahana tamin'ny herinandro lasa dia mitodika voalohany indrindra amin'i Etiopia izay, tamin'ny 25 Aprily, nisambotra mpikambana enina avy amin'ny Zone Nine, diso fantatra loatra amin'ny fanakianana ny politika sy ny famoretana. Notazonina hanaovana fanarahamaso ihany koa ny mpanao gazety iray, ahiahiana ho mifandray tendro amin'ilay vondrona . Ny ampitson'izay, mpanao gazety roa hafa ihany koa no nosamborina noho izay antony izay ihany. Araka ny loharanom-baovao sasantsasany, fiampangàna atao an'ireo bilaogera ireo ny hoe « niarahany niasa tamin'ireo fikambanana avy any ivelany milaza fa mitolona ho an'ny zon'olombelona sy… ny nahazoany famatsiambola mba hanaingàna herisetram-bahoaka tamin'ny alàlan'ny tambajotra sosialy ». Maro ireo mpikambana ao anatin'ilay vondrona no mandray anjara ato amin'ny Global Voices, manao asan'ny mpandika na toniandahatsoratra. Tamin'ny 2012, nadray nandray anjara ny Zone Nine tamin'ny famoronana ny dika amin'ny teny amharique ny tranonkala GV . Tao anaty lahatsoratra iray momba ilay fisamborana, i Endalk no nanazava ny nipoiran'ny anarana iombonan'ilay fiarahamientana misy azy :
« Misy fonja be iray miorina any ambanivohitr'i Addis-Abeba, Kality, toerana itazonana amin'izao fotoana izao ny marobe amin'ireo gadra noho ny resaka politika, isan'ireny ireo mpanao gazety Eskinder Nega sy Reeyot Alemu. Nanome vaovao be dia be ho anay ireo mpanao gazety, momba ilay toeram-pamonjàna sy ny fomba fiainana mahaketaka tsy maintsy iainan-dry zareo ao. Mizara ho faritra valo i Kality, ka ilay faritra farany, ny Faritra Fahavalo, dia natokana ho an'ireo mpanao gazety, ireo mpikatroka mitolona ho an'ny zon'olombelona ary ireo mpanohitra. Rehefa nitambatra izahay, nanapaka hevitra ny hamorona bilaogy iray ho an'ilay fonja lasa fanoharana izay iainan'ireo Etiopiàna rehetra. Teo no teraka ny Zone Nine (Faritra Fahasivy). »
Samy efa nitaky ny hamotsorana an-dry zareo daholo ny Human Rights Watch, ny Committee to Protect Journalists sy ny Electronic Frontier Foundation
Fahalalahana maneho hevitra : Katsahan'i Arabia Saodita ny hiantohana ny fisian'ny « votoaty tsara kalitao » ao amin'ny YouTube
Nambaran’ireo manampahefana saodiàna, tsy ela akory izay, ny fandaharanasa natao hiantohana ny fisian'ny « votoaty tsara kalitao» ho an'ireo olompireneny any amin'ireo sehatra fandefasana lahatsary toy ny YouTube. Sosokeviny amin'izany indrindra ny hoe, ato ho ato dia ny Kaomisiôna iraisana misahana ireo fampahalalambavoavao haino vaky jery no mamoaka ny lisansa ho an'ireo fantsona YouTube izay handalo sivana fijerena ny « kalitao ». Tsy nampoizin'ireo manampahefana ny hahita olompirenena am-polony maro nandefa lahatsary tao amin'ny YouTube nanakiana ny fianakavian'ny mpanjaka sy/na nitaraina mikasika ny karama na ny tsy fananana asa.
Any Rosia, misy lalàna iray vaovao nolanian'ny Douma, antenimiera mpanao lalàna ao amin'ny parlemanta, manery ireo bilaogera izay manana mpitsidika isanandro miisa maherin'ny 3.000 mba hisoratra anarana ao amin'ilay sampandraharaha rosiana mpandrindra ny fampahalalambaovao, Roskomnadzor. Araka izany dia hiantsoroka ny andrikitra manoloana ny lalàna mitovy amin'ny an'ireo mpampahalalal vaovao nahazatra ihany koa ireo bilaogera ireo, isan'izany ny fandraràna tsy hanao fanambaràna rehefa manakaiky ny andro fifidianana, nefa tsy mitovy akory ny fiarovana azo.
Ho setrin'io fiovàna ara-politika io, nasian'ny LiveJournal Russia fanovàna ireo ‘widgets’ mampiseho ho hitam-bahoaka ny isan'ny mpanjohy mba hivoahan'ny hoe « 2500+ » ho an'ireo bilaogy manana mpanjohy mihoatra ny 2.500, fa tsy ny fitambaran'ny tena isa marina. Ilay lohamilina tena fanaovana fikariohana, Yandex, tetsy andaniny dia nisafidy ny hanajanona ny tolotra tao aminy fanasokajiana ireo bilaogy, zavatra iray tena nalaza be teo aloha.
Herisetra: noho ny kaonty fanarabiana iray, nanao be midina tany an-tranon'ny olona iray mpampiasa Twitter ny polisy tao Etazonia
Voarara amin'ny fomba ofisialy izao ao amin'ny Twitter ireo kaonty fanarabiana, ary tsy vonona ny hisangisangy amin'ilay toedraharaha velively ireo manampahefana. Jim Ardis, ben'ny tanàna ao Peoria, tanàna kely iray ao anatin'ny Fanjakàn'i llinois, tsy ela akory izay, dia nametraka fitoriana ofisialy nanenjehany ilay kaonty mpanaraby @peoriamayor, na eo aza ny fiarovana ny fahalalahana maneho hevitra voarakitra ao anatin'ny fanavaozana voalohany. Nahazo taratasy fanomezandàlana hanao fisavàna ny polisy, nanao bemidina tany an-tranon'ilay olona mitantana ilay kaonty ary nisambotra ilay mpiara-manofa aminy koa noho ny fitazonana rongony marijuana. Farany, ny mpampanoa lalàna an'ny fanjakàna dia nandà ny hametraka fitoriana, satria ny lalàna ao amin'ny Fanjakàna manasazy izay olona misandoka ho mpiasam-panjakana dia tsy maharakotra hatrany amin'ny sehatry ny media elektrônika. Taminà raharaha tany aloha, notsindrian'ny fiarovana fa ireo kaonty fanarabiana dia tokony tsy hiharan'ny fiampangàna ho nanala baraka raha toa ka mibaribary ny natiora maha-tsy izy azy. Amin'ny tranganà kaonty iray toy ny @peoriamayor, izay ny hafatra isanandro dia miresaka zavamahadomelina sy fampanofàna vatana (ohatra, « iza no nangalatra ilay pipa fifohako rongony ? »), dia toa hita ho nihatra ihany io fenitra io. Nakaton'ny Twitter ilay kaonty @peoriamayor.
Ilay shinoa bilaogera, Qin Zhihui, dia nizaka sazy telo taona am-ponja, sazy notinapaky ny tribonaly shinoa noho ny resaka « fanalambaràka» sy « fandrisihana fifandirana ary korontana », hoy ny CCTV. Izy no olona voalohany voaheloka tamin'ireo olona an-jatony nosamborina tao anatin'ilay fanentanan'ny governemanta « ady amin'ny tsaho ».
Zo hanana fiainana manokana : loza mitatao no andraisan'ireo manampahaizana ilay lalàna kanadiàna vaovao
Mba hiarovana ireo Kanadiàna amin'ny fisandohana ny momba azy ireo, misy lalàna kanadiàna iray vaovao, ny Digital Privacy Act (Bill S-4), mikendry ny hametraka ireo tsy maintsy atao amin'ny resaka famoahana torohay sy ny fiarovana ireo angondrakitra. Heverin'ireo mpanohitra ilay lalàna S-4, toa an'i Michael Geist, profesora mampianatra lalàna ao amin'ny Oniversiten'i Ottawa, fa hitondra mankany aminà fameperana marobe ny zo hanana fiainana manokana io, ary tafiditra anatin'izany ny tsimatimanota tanteraka ho an'ireo fikambanana rehetra manome torohay manokana momba ireo mpampiasa azy ho an'ny mpitandro filaminana na fikambanana iray hafa milaza fa manao fanadihadiana momba « ny (mety ho) famelezana ny fiainana manokan'ny olona iray », nefa tsy mandalo akory amin'ny tribonaly.
Fitantanana ny aterineto : Nouvelle-Zélande vonona ny hanaiky ny fahalalahana nomerika ve?
Garth Hughes, solombavambahoaka neozelandey, nanosoka lalàna tao amin'ny Parlementa, lalàna iray mifandraika amin'ireo zo sy fahalalahana nomerika, ikatsahana ny fiarovana ny zo ho afaka miditra amin'ny aterineto, ny fahalalahana maneho hevitra, hanana fikambanana, ny tsy fitanilàn'ny aterineto, ny zo tsy hitonona anarana, ny zo hanana fiainana manokana sy hiady amin'ny fanarahamaso. Tafiditra ao anatin'ilay sosokevitra ny dingana iray ho fakàna hevitra, izay hahafahan'ireo Neozelandey miady hevitra momba izay handrafetana ilay lalàna.
Tamn'ny herinandro, nifamory tao Sao Paulo nandritra ny fivoriana NETMundial ireo governemanta, fiarahamonina sivily, orinasa ary vondrom-piarahamonina avy amin'ireo sehatra akademika sy teknika, mba hiresaka ny hoavin'ny fitantanana ny aterineto. Nanao adihevitra mafana ireo mpandray anjara, momba ny tsy fitongilanan'ny aterineto, ny fanarahamaso faobe, ny zavabaovao « tsy misy fahazoandàlana » ary nofaranana tamin'ny fanoratana ny Multistakeholder Statement of Sao Paulo (Fanambaràn'ireo mpiaraka miombona antoka isan-tsokajiny), antontan-kevitra iray tsy an-tery sy tsy manelingelina velively ny resaka fanarahamaso izay nandrandrain'ireo fiarahamonina sivily fatratra. Nandritra ny kaonferansa an-dahatsary iray tao amin'ny Arena NETmundial, toerana ofisialy nanaovana ilay hetsika, nolazain'i Julian Assange ny momba ny fiandrianana nomerika, tamin'ny fiantsoana ireo fiarahamonina sivily mba « hamokatra rafitra iray hafa » miaraka amin'ireo « tambajotra vaovaon'ireo fikambanana, sy fotokevitra vaovao ary soatoavina vaovao ». Azonareo atao ny mijery an'i Ellery Biddle, Marianne Diaz sy Ben Wagner, mpikambana avy amin'ny Global Voices Advox, miresaka ny NETmundial nandritra ny GV Face tamin'ny herinandro lasa talohan'ity.
Indostria : fofonaina farany ho an'ny tsy fitongilanan'ny aterineto ao Etazonia
Nambaran'ny Kaomisiôna federaly misahana ny fifandraisandavitra ao Etazonia fa hametraka sosokevitra mahakasika ireo fepetra vaovao ry zareo mba hahafahan'ireo mpamokatra votoaty toy ny Netflix sy Disney handoa vola ho an'ireo mpanome tolotra fidirana aterineto mba hahafahaha misitraka tolotra haingam-pandeha kokoa, manamontsana indray mandeha tsy miverina ny tsy fitongilanan'ny aterineto. Dan Gillmor, mpandalina ao amin'ny Guardian, milaza fa miaraka amin'ireo fepetra natolotra dia « hanana fahefana goavana ny Verizon sy Comcast mba handray fanapahankevitra momba izay karazana vaovao hiantefa any amin'ny fitaovako sy ny anao, sy izay ho filaharany ary ny hafainganany ».
Ny fikatrohana sy ireo mpisera amin'ny aterineto : Manao hetsika hanoherana ny lalàna iray vaovao momba ny fifandraisandavitra ny mponina ao Meksikô
An'aliny maro ireo mpanao fihetsiketsehana nanangana rojon'olombelona tamin'ny Alahady 27 Arpily, niainga avy eo amin'ny foiben-toeran'ny Televisa ary niitatra namakivaky ny tanàna, ho fanoherana ireo fanavaozana ny lalàna mifehy ny fifandraisandavitra izay lasa loza mitatao ho an'ny fahalalahana maneho hevitra ety anaty tambajotra. Vinavinain'ireo mpikarakara ny hahatratraran'ilay rojon'olombelona ny trano fonenan'ny filoha Enrique Pena Nieto, izay loharano nipoiran'ilay fanavaozan-dalàna, saingy noteren'ny polisy hiova làlana ireo mpanao hetsipanoherana. Nahemotra ho amin'ny Jona ny fifidianana handaniana ity tolodalàna ity.
Fanontàna sy fandalinana (amin'ny teny anglisy avokoa)
Manao famandrihana hahazo ny Tatitry ny Mpisera amin'ny alàlan'ny imailaka.